हामी कस्तो दुध खाँदैछौ ? ४२ ब्राण्डका दूध मध्ये ४० मा भेटियो सोडै सोडा ! | Rajmarga
काठमाडौ । अहिले काठमाडौंमा दैनिक साढे ५ लाख लिटर हाराहारी प्रशोधित दूध (पाउच) उपभोक्ताले दैनिक खपत गरिरहेका छन् । हरेक दिन काठमाडौं सहरबाट कम्तीमा २ करोड ९७ लाख रुपैयाँ किसानले गाउँ लैजान्छन् ।
यी सबैमा सरसफाइको कमी देखिन्थ्यो । यीमध्ये दूध बनाउन प्रयोग गरिने धूलो दूधका बोरामा उत्पादन म्याद नखुलेको भेटिएपछि आधुनिक डेरीका ३ र पुष्प डेरीको एक गरी ४ वटा गोदाममा मन्त्री खनालले सिलबन्दी गराए । धूलो दूध बाक्लो दही बनाउन तथा दूधमा हुने ठोस पदार्थ (एसएनएफ) को मात्रा बढाउन प्रयोग गरिन्छ । त्यस्तै उद्योगीले किसानबाट दूधकम संकलन नहुने अवस्थामा धूलोबाटै प्रशोधित दूध बनाई चिल्लो पदार्थ (फ्याट) मिश्रण गरी बिक्री गर्छन्। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
Previous post: सरकारी बजेट स्वाहा पार्दै श्रीमतीसँग घुमिफिर !
Next post: उपभोग्य वस्तुको भाउ आकाशियो, खाद्यान्नको कृत्रिम अभाव गर्नेलाई १० वर्ष कैद